မန္တလေးမြို့တွင် ဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်စေမည့် စာအုပ်များဖြန့်ဝေပြီး ၉၆၉ တံဆိပ်များ လိုက်လံကပ်၍ လှုံ့ဆော်နေ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Shame to you U Thein Sein-Min Aung Hlaing for cowardice and failure to arrest Wira Thu led 969 movement
ဘာသာရေးဟာ လောကီကြောင်းမှာ စပ်ယှက် သင့်မသင့်- လင်းထင် »
မန္တလေးမြို့တွင် ဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်စေမည့် စာအုပ်များဖြန့်ဝေပြီး ၉၆၉ တံဆိပ်များ လိုက်လံကပ်၍ လှုံ့ဆော်နေ
မေလ-၃၁၊ ၂၀၁၃ M-Media ရဲရင့်သူ
မန္တလေးမြို့။ ။ မန္တလေးမြို့တွင် ဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ပဋိပက္ခဖြစ်စေမည့် စာအုပ်များဖြန့်ဝေပြီး ၉၆၉ တံဆိပ်များကို လိုက်လံကပ်နေကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
ယင်းပဋိပက္ခဖြစ်စေရန် လှုံ့ဆော်မှုအား ဆက်သွယ်စုံစမ်းရာ မန္တလေးမြို့ ဈေးချိုအနီးအ၀ိုက်၊ ၂၇ လမ်း၊ ၈၃x၈၄ လမ်းကြားအတွင်းရှိ မိဘမေတ္တာ ကွမ်းယာဆိုင်မှ အဆိုပါ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ ဖြစ်စေမည့် စာအုပ်များ ဝေငှနေသည်ကို သိရပါတယ်။
“အစကတော့ မသန်းအေး (မိဘမေတ္တာကွမ်းယာဆိုင်)ရဲ့ ယောက်ျားက ၉၆၉ တံဆိပ်တွေ ဝေတယ်၊ ကျွန်မက မကပ်ချင်ဘူး။ ဆိုင်မှာ ဘုရားစင် ရှိတယ်ပြောတော့ သူက ခင်ဗျားဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီး ပြောပြီး အတင်းကပ်သွားတယ်ဆိုင်မှာ။ နောက်ပြီး ပြောသေးတယ် ဒီတံဆိပ် မကပ်ထားရင် နင်တို့ဆိုင်ကို ကုလားဆိုင်နဲ့ မှားဖျက်ရင် တာဝန်မယူဘူးလို့လည်း ပြောတယ်။ တကယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့က ဒီနားလေးမှာ ဆိုင်လာဖွင့်တာပါ ကိုယ်ပိုင် ဆိုင်ခန်းလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနားက ဘာသာပေါင်းစုံ ဆိုင်တွေ ရှိပါတယ်၊ ဒီနေ့ကျ ဒီစာအုပ် လာပေးတယ်၊ မလိုချင်ဘူး ပြောတော့ ဇွတ်အတင်းပေးသွားတယ်”လို့ အဆိုပါစာအုပ်လက်ခံရရှိပြီးနှင့် ၉၆၉ တံဆိပ် ကပ်ခံရသူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှ ပြောပြလာပါတယ်။
အဆိုပါ မိဘမေတ္တာ ကွမ်းယာဆိုင်သည် လမ်းဘေးတွင် တည်ခင်းဖွင့်သော ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပြီး စည်ပင်မှ လာဖမ်းလျှင် အမြဲတမ်း ပြေးနေရသော ဆိုင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၄င်းတို့နေထိုင်သည်မှာလည်း မြို့သစ်ထဲတွင် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ရပ်ကွက်နှင့် ဘာမှ သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း ပဋိပက္ခဖြစ်စေရန် နေ့စဉ် သွေးထိုးနေကြောင်း ဆက်လက် စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။
This entry was posted on June 1, 2013 at 7:33 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.